စောစောထတတ်တဲ့အကျင့်လေးကို ဒီလိုပျိုးထောင်မယ် – Trend.com.mm
Posted on July 24, 2018 April 19, 2019 by Wint
မနက်စောစောထဖို့ဆိုတာ အပြောသာ လွယ်တယ်။ တကယ်တမ်း လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့က ကိုယ့်
စိတ်ကိုယ် နိုင်မှဖြစ်မယ်။ ထလိုက်တာပဲ ဘာခက်လဲလို့ တွေးကောင်းတွေးမိမှာပဲ။ မနက်ပိုင်းဆို
အရမ်းအိပ်လို့ကောင်းတဲ့ ခံစားချက်က ဘာနဲ့မှမတူတာ တော်တော်များများလည်း သိကြပါတယ်။
ထလိုက်ပြီးမှ အိပ်ယာပေါ်ပြန်ခွေချင်စိတ်က အရမ်းကိုကြီးစိုးနေတာကိုး။ ၅မိနစ်ရရ ၊ ၁ဝမိနစ်ရရ ခဏလေး ဝင်နပ်ရတာကိုပဲ ကြိုက်ကြတဲ့ လူတွေချည်းပါပဲ။ အဲ.. ဝီရိယကောင်းတဲ့ လူတွေကိုတော့ မပြောပါဘူးလေ။
မနက်စောစောထရင် ရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကို အရင်ဆုံးပြောပြပေးမယ်။
– အိုင်ဒီယာကောင်းတွေ ပိုထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်
– ကြိုတင်စီစဉ်နိုင်၊ အလုပ်တွေ စောစောပြီးမြောက်
ဘာကြောင့် အစောကြီးထသင့်တာလဲ (ခိုင်မာတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိသင့်)
မနက်စောစောထရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက ခိုင်မာနေရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ မနက်ထပြီး ငါဘာလုပ်မလဲ ? ဒါကိုသေချာ စဉ်းစားထားရမယ်။ မနက်ကတော့ စောစောထလိုက်တာ ။ ဘာမှလည်း မလုပ်ဘူး။ ဟိုယောင် ဒီယောင်နဲ့ဆိုလည်း အလုပ်မပြီးပါဘူး။ တရားထိုင်မလား ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မလား ၊ တစ်နေ့တာ အချိန်ဇယားတွေ စဆွဲမလား ။ သေချာ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ မနက်စောစောထဖို့ Alarm ပေးပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
မနက် စောစောထခြင်းဖြင့် အိပ်မက်တွေကို အကောင်ထည်ဖော်
အိပ်မက်တွေကို အကောင်ထည်ဖော်နိုင်သူ တစ်နည်းအားဖြင့် အောင်မြင်နေသူတွေဟာ မနက်စော
စောထတတ်တဲ့ အကျင့်ကိုမွေးထားကြတယ်။ နေ့တိုင်း ထနေရင် မျက်လုံးက အလိုလိုပွင့်တယ် Alarm တောင်ပေးစရာမလိုပါဘူး။ စောစောထရင် အိပ်ချင်စိတ်က အရမ်းများနေမှာသိပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ကို ပျင်းခွင့်မပေးနဲ့။ ဝုန်းခနဲ ထလိုက်။ ရေချိုးခန်း ပြေး၊ မျက်နှာသစ်လိုက် ။ အနည်းဆုံး
တော့ အိပ်ချင်စိတ်ပျောက်သွားမှာပါ။ ပြီးရင် လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်ပါ။
လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ လေးပင်တယ်။ ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရသူတွေ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်
လို့ ကြာရင်ပုံပျက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးပါ။ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်ပေးရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ချွေးတွေထွက်ပြီး သွေးလည်ပတ်မှုလည်း ကောင်းစေတယ်။ လှုပ်ရှားပေးနေတော့ မလိုအပ်တဲ့ အဆီတွေကိုလည်း ဖယ်နိုင်တာပေါ့။
အဓိက မနက်စောစောထရတာဟာ အချိန်ပိုထွက်လာလို့ပါ။ တစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းတွေပြီးမြောက်သွားရင် နောက်ထပ် ကိုယ်ဝါဿာနာပါရာအလုပ်လေးတွေအတွက် အချိန်ပေးလာနိုင်တာပေါ့။ ပုံမှန် ထနေကျထက် နည်းနည်းလေးစောပြီး ထကြည့်လိုက်ပါ။ တကယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
မနကျစောစောထဖို့ဆိုတာ အပွောသာ လှယျတယျ။ တကယျတမျး လကျတှကေ့ငျြ့သုံးဖို့က ကိုယျ့
စိတျကိုယျ နိုငျမှဖွဈမယျ။ ထလိုကျတာပဲ ဘာခကျလဲလို့ တှေးကောငျးတှေးမိမှာပဲ။ မနကျပိုငျးဆို
အရမျးအိပျလို့ကောငျးတဲ့ ခံစားခကျြက ဘာနဲ့မှမတူတာ တျောတျောမြားမြားလညျး သိကွပါတယျ။
ထလိုကျပွီးမှ အိပျယာပျေါပွနျခှခေငျြစိတျက အရမျးကိုကွီးစိုးနတောကိုး။ ၅မိနဈရရ ၊ ၁ဝမိနဈရရ ခဏလေး ဝငျနပျရတာကိုပဲ ကွိုကျကွတဲ့ လူတှခေညျြးပါပဲ။ အဲ.. ဝီရိယကောငျးတဲ့ လူတှကေိုတော့ မပွောပါဘူးလေ။
မနကျစောစောထရငျ ရမယျ့အကြိုးကြေးဇူးလေးတှကေို အရငျဆုံးပွောပွပေးမယျ။
– အိုငျဒီယာကောငျးတှေ ပိုထုတျသုံးလာနိုငျတယျ
– ကွိုတငျစီစဉျနိုငျ၊ အလုပျတှေ စောစောပွီးမွောကျ
ဘာကွောငျ့ အစောကွီးထသငျ့တာလဲ (ခိုငျမာတဲ့ အကွောငျးရငျးတဈခုရှိသငျ့)
မနကျစောစောထရတဲ့ အကွောငျးရငျးတဈခုက ခိုငျမာနရေငျ ပိုကောငျးပါတယျ။ ရညျရှယျခကျြ ကောငျးဖွဈဖို့လိုတယျ။ မနကျထပွီး ငါဘာလုပျမလဲ ? ဒါကိုသခြော စဉျးစားထားရမယျ။ မနကျကတော့ စောစောထလိုကျတာ ။ ဘာမှလညျး မလုပျဘူး။ ဟိုယောငျ ဒီယောငျနဲ့ဆိုလညျး အလုပျမပွီးပါဘူး။ တရားထိုငျမလား ၊ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျမလား ၊ တဈနတေ့ာ အခြိနျဇယားတှေ စဆှဲမလား ။ သခြော ရှေးခယျြဆုံးဖွတျပွီးမှ မနကျစောစောထဖို့ Alarm ပေးပါလို့ အကွံပေးခငျြပါတယျ။
မနကျ စောစောထခွငျးဖွငျ့ အိပျမကျတှကေို အကောငျထညျဖျော
အိပျမကျတှကေို အကောငျထညျဖျောနိုငျသူ တဈနညျးအားဖွငျ့ အောငျမွငျနသေူတှဟော မနကျစော
စောထတတျတဲ့ အကငျြ့ကိုမှေးထားကွတယျ။ နတေို့ငျး ထနရေငျ မကျြလုံးက အလိုလိုပှငျ့တယျ Alarm တောငျပေးစရာမလိုပါဘူး။ စောစောထရငျ အိပျခငျြစိတျက အရမျးမြားနမှောသိပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျကို ပငျြးခှငျ့မပေးနဲ့။ ဝုနျးခနဲ ထလိုကျ။ ရခြေိုးခနျး ပွေး၊ မကျြနှာသဈလိုကျ ။ အနညျးဆုံး
တော့ အိပျခငျြစိတျပြောကျသှားမှာပါ။ ပွီးရငျ လုပျစရာရှိတာ ဆကျလုပျပါ။
လှုပျရှားမှုမရှိတဲ့ ခန်ဓာကိုယျဟာ လေးပငျတယျ။ ထိုငျပွီး အလုပျလုပျနရေသူတှေ လကေ့ငျြ့ခနျးမလုပျ
လို့ ကွာရငျပုံပကျြသှားနိုငျပါတယျ။ ပုံမှနျ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပေးပါ။ ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးကို ပွုလုပျပေးရငျ ခန်ဓာကိုယျထဲက ခြှေးတှထှေကျပွီး သှေးလညျပတျမှုလညျး ကောငျးစတေယျ။ လှုပျရှားပေးနတေော့ မလိုအပျတဲ့ အဆီတှကေိုလညျး ဖယျနိုငျတာပေါ့။
အဓိက မနကျစောစောထရတာဟာ အခြိနျပိုထှကျလာလို့ပါ။ တဈနတေ့ာ လုပျငနျးတှပွေီးမွောကျသှားရငျ နောကျထပျ ကိုယျဝါဿာနာပါရာအလုပျလေးတှအေတှကျ အခြိနျပေးလာနိုငျတာပေါ့။ ပုံမှနျ ထနကေထြကျ နညျးနညျးလေးစောပွီး ထကွညျ့လိုကျပါ။ တကယျအကြိုးရှိတယျဆိုတာ တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။
E’Dawn တို့နှစ်ယောက်နဲ့ မလိုအပ်ပဲ အထိတွေ့တွေ သိပ်များနေတယ်လို့ ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ Hyuna